दूध पिएलगत्तै नखानुहोस् यस्ता चीज, नत्र भोग्नुपर्छ यस्तो समस्या | स्वास्थ्य जीवनशैली
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on दूध पिएलगत्तै नखानुहोस् यस्ता चीज, नत्र भोग्नुपर्छ यस्तो समस्या
आजकल हरेक कोई आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर दुखी हुन्छन्। तर हामी सबै यति व्यस्त हुन्छौँ कि आफ्नो ठिक तरिकाले ध्यान पनि राख्ने गर्दर्नौ।त्यसैले कतिपय मानसि त्यत्तिकै बिमार हुने गर्दछन्। यदि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहने भने हामी कसरी हाम्रो काम पुरा गर्न सक्दछौँ त ?
हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको खास ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ।यस्तो अवस्थामा, धेरै चीजहरू लिएर, हामी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्छौं, र हामी धेरै रोगहरूबाट पनि बच्न सक्छौं। म तपाईंलाई बताउँछु कि यसमा पहिलो नाम दूध हो जुन तपाईंको स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्छ।
हो, दुध जसले पनि पिउन सक्छन् र यसको सेवनले तपाईंको शरीरमा धेरै फाइदाहरू छन्। तर आज हामी तपाईंलाई यो कुरा भन्न जाँदैछौं कि यदि तपाईंले दूध पिउनुहुन्छ भने, तपाईंले पनि यसमा केही सावधानी अपनाउनु पर्नेछ।
किनकि यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएन भने यसले तपाईंलाई नोक्सान पनि गर्न सक्दछ। दुध पिउनुभन्दा अगाडि यी चिज खानुहुँदैन अन्यथा यसले लाभको सट्टा हानि गर्न सक्छ। त्यसोभए आउनुहोस् जानौँ हामीले कुन चीजहरू जुन दुधको अघि वा पछि खानुहुन्न।
विदेश बाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ?यस्तो छ आजको विनिमय दर
जस्तो सुकै दादको समस्याबाट पनि केहि दिन मै छुटकारा दिन्छ यो घरेलु उपायले, जानिराख्नुस् !
टिमुर र ज्वानु पानीमा राखेर दिनमा दुईपटक वाफ लिए को-रोना बाट बच्न सकिने, यस्ताे छ तरिका !
प्राकृतिक रुपमा नै अक्सिजन बढाउन के गर्ने ? डा. जोशीका अनुसार के खाने के नखाने ? एक पटक अबस्य पढौ